Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaliya oo Gurigiisa ku marti qaaday Safiirka Imaaraadka Carabta (Sawirro)
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa hoygiisa magaalada Muqdisho ku qaabilay safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya.
C/raxmaan C/shakuur oo u jawaabay Sh. Xasan Daahir: “Wadaadka dhiigeyga banneeyay waxaa soo abaabushay Dowladda..”
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa mar kale ka jawaabay hadal kasoo yeeray Wadaadka Xasan Daahir Aweys oo ku saabsanaa gefkii uu u geystay xadiis ka sugnaaday Nebiga NNKH, wuxuuna ku eedeeyay dowladda Soomaaliya siiba Hay’ada Nabadsugida ee NISA inay soo abaabushay Xasan Daahir oo isagoo xanuunsana ay soo kicisay.
Culimada Alshabaab oo Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur xukun ku riday, soona jeediyey in magaca laga bedelo
Warbaahinta Alshabaab ayaa lagu faaqiday arrinta taagan ee ku saabsan siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo faalso ama wax aan jirin ku tilmaamay xadiis ka sugan Nebiga NNKH markii uu soo qaatay qeyb ka mida xadiiska inay haweenka naaqus ka yihiin Diinta iyo Caqliga.
Dagaal u dhaxeeya Maleeshiyo kasoo kala jeeda Puntland iyo Galmudug oo ka qarxay Gobolka Mudug
Wararka laga helayo Gobolka Mudug ayaa sheegaya inuu halkaasi ka qarxay dagaal xoog leh oo u dhaxeeya maleeshiyo kasoo kala jeeda degaanada Puntland iyo Galmudug.
C/raxman C/shakur: “Dowladda Somalia waxay u ogolaatay Argagixiye Xasan Daahir inuu ku baaqo in Aniga la i dilo..”
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay Sheekh Xasan Daahir Aweys oo u xiran u ogolaatay inuu ku baaqo in la dilo isaga.
Alshabaab oo War kasoo saartay Qarixii lagu dilay Guddoomiyaha degmada Aw-dheegle
Alshabaab ayaa sheegtay inay ka danbeysay dilka Guddoomiyihii degmada Awdheegle oo maanta ku dhintay Qarax Miino oo lagu qaaday Gaari uu la socday agagaarka degaanka Sabiid ee Gobolka Sh/Hoose.
Guddiga Koongareeska Mareykanka u qaabilsan Baarista iyo Sirdoonka ayaa si rasmi ah Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ugu soo eedeeyey inuu ku xadgudbay awoodihiisa una adeegsaday dano shaqsiyeed oo gaara.
Nin isku dayey inuu Weerar Qarax ah ka geysto Muqdisho oo gacanta lagu dhigay & NISA oo soo bandhigtay
Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka ee NISA ayaa shaacisay muuqaalka Nin la sheegay inuu weerar Bam Gacmeed geysan rabay, iyadoo ayc iidamada gacanta ku dhigeen intii uusan falkaasi fulin.
Maamulka G/Banadir oo soo bandhigay Diyaargarowga Qeybta Gurmadka ee Roobabka kusoo wajahan Dalka [Sawirro]
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ayaa soo bandhigay diyaargarowga qeybta gurmadka degdegga ah oo heegan la geliyey, kadib markii laga digay roobab waaweyn iyo duufaano kusoo wajahan Soomaaliya.
Boqorka Sacuudiga oo Amiirka Dalka Qatar ku casuumay Shir Madaxeedka Khaliijka ee magaalada Riyaad
Boqorka Sacuudiga Salmaan Bin C/casiis ayaa casuumaad u diray Amiirka Dalka Qatar Hamad Bin Khaliifa Althani, iyadoo uu ku casuumay ka qeybgalka shirka dalalka Iskaashiga Khaliijka ee ka dhici doona magaalada Riyaad.
AKHRISO: Magacyada Wasiirada cusub ee uu magacaabay Madaxweynaha Hirshabeelle [Isku-shaandheyn kooban]
Madaxweynaha maamulka Hirsahbeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dib ugu laabtay caasimadda maamulka Hirshabeelle ee Jowhar oo uu muddo bil ka badan ka maqnaa isagoo ku sugnaa magaalooyinka Muqdisho iyo Beledwwyne.
AKHRISO: Magacyada Odayaasha & Siyaasiyiinta Gobolka Bari ee lagu xiray Boosaaso & Diidmada Imaaraadka oo sii kordheysa
Xukuumadda Puntalnd ee Madaweyne Siciid C/llaahi Deni ayaa sii wada xariga odayaasha iyo siyaasiyiinta Gobolka Bari, kadib kacdoon waxgarada Gobolkaasi wadaan oo ku saabsan diidmada in Imaaraadka lagu wareejiyo ilaha dhaqaalaha Gobolka.
Ganacsatada Kalluunka magaalada Muqdisho oo Shaqo joojin ku jira & Canshuur lagu kordhiyey…
Qaar ka mida Ganacsatada Kalluunka magaalada Muqdisho ayaa ku dhaqaaqay shaqo joojin, kadib markii lagu kordhiyey cashuurta ay ka qaadi jirtay dowladda Somalia.